राजा महेन्द्रबाट यसरी भएको थियो पुस १ मा प्रजातन्त्रको हत्या - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
राजा महेन्द्रबाट यसरी भएको थियो पुस १ मा प्रजातन्त्रको हत्या
Posted by Headline Nepal | १ पुष २०७३, शुक्रबार ११:१६ |
राजा त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र राजा भए ।
हामी राजा त्रिभुवनले बचन दिए बमोजिम ‘चाँडै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुप¥यो’ भन्ने, नयाँ राजा महेन्द्र चाँही पन्छदै जाने । त्यसपछि त राजा र हामीवीच झन द्वन्द्व सुुरु भइहाल्यो ।
विसं २०१४ सालमा सर्लाहीमा खडेरीको लक्षण देखियो । म खाद्यान्न भण्डारणको लागी सरकारलाई सचेत गराउन काठमाडौं आएँ । मेरो साथमा त्रिपुरवरका साथ अन्य केही साथी थिए । काठमाडौंमा त नेपाली काँग्रेस, प्रजापरिषद र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचनको लागी दबाब दिन ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलन चलाईरहेका थिए ।
राजा महेन्द्र चलाख । उनले भडकिन लागिरहेको जन विद्रोह थामथुम पार्ने रणनीति अपनाए । उनले नेताहरुसँग वार्तामा ‘संविधानसभाको निर्वाचन नगरौं, यसमा डबल खर्च हुन्छ । बरु संविधान बनाउन इंगल्याण्डबाट संविधानविद् आइभर जेनिङ बोलाउँछु । एकै पटक संसदकै निर्वाचन नै गरौं’ भन्ने प्रस्ताव राखे । जनताले संविधान बनाए आफुलाई खत्तम गर्छन् भन्ने महेन्द्रमा भय थियो । त्यसैले उनी संविधानसभाको निर्वाचन टार्न संसदको निर्वाचन गराउने पक्षमा रहे ।
२०१५ साल फागुन ७ गते संसदको पहिलो आम निर्वानचनको मिति तोकियो । त्यसका लागि एउटा सल्लाहकार सभा गठन गरियो । सर्लाहीबाट म र वृक्षलाल सिंह मनोनीत भएका थियौं । सल्लाहकार सभाको अवधि एक महिनाको थियो । सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष पदका लागि नेपाली काँग्रेसले होराप्रसाद जोशीको नाम प्रस्तावित गरेको थियो । मैले चाँही ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई अध्यक्ष भएमा मात्र समर्थन गर्ने’ अडान राखें । काँग्रेसले भट्टराईलाई खडा नगरेपछि मैले अर्कै निर्णय गरें । स्वतन्त्र सदस्यहरुले इलाहबाद युनिभर्सीबाट बिए पास गरेका युवा सुर्यबहादुर थापालाई खडा गरे । मैले थापाकै नाम प्रस्तावित गर्न मन्जुरी दिएँ । थापा सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष भए । होराप्रसाद जोशी हारे । संविधान बन्यो । संविधानमा राजालाई ‘पावर’ दिइयो । राजालाई के मनमा लाग्यो भने सरकार विघटन गर्नसक्ने दफा पनि राखीयो । त्यो बुझेर पनि हामी निर्वाचनमा लाग्यौं । नेपाली काँग्रेसले कुल ९० स्थानमध्ये ७४ स्थानमा बिजय प्राप्त ग¥यो । त्यो दुई तिहाइ बहुमत थियो । निर्वाचनमा प्रमुख दलका केही दिग्गज नेताहरु भने हारे । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, प्रजापरिषदका टंक प्रसाद आचार्य, भद्रकाली मिश्र, नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसका डिल्लीरमण रेग्मी, कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र केशरजंग रायमाझी, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका डा. केआई सिंह र तराई काँग्रेसका बेदानन्द झा हारे । सन् १९५९ मे २७ मा वीपीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसको प्रथम जन निर्वाचीत सरकार गठन भयो ।
नेपाली काँग्रेसको सरकारले मुलुकमा क्रान्तिकारी सुधार गर्न थाल्यो । जंगलको राष्ट्रियकरण भयो । राजा रजौटा उन्मुलन गरियो । विर्ता उन्मुलन गरियो । यसबाट राजाका सबै आर्थिक स्रोत गुम्न थाले । यसले दरबारीयाहरुमा छटपटी बढायो । जंगल राष्ट्रियकरण गर्दा सरकारले मुआवजा दिएको थियो । राजाका भाइ हिमालयलाई त्यो मुआवजा पुगेनछ । उनले त हाकाहाकी भने, ‘मुआवजा थोरै भयो, यो त पुग्दै पुगेन ।’ विपीले स्पष्ट रुपमा भनीदिए, ‘यो भन्दा बढता पाईदैन ।’
यस्ता धेरै कारणहरु रहे, जसले गर्दा दरबार र जन निर्वाचित सरकारवीच खटपट सुरु हुन थाल्यो । सरकारी कर्मचारीको नियुक्ति र बर्खास्तगीबारे राजा र प्रधानमन्त्रीवीच मतभेद हुन थाल्यो । सरकारको कार्यशैली देख्दा राजालाई कतै आफैलाई खत्तम गर्ने त हैनन् भन्ने पनि लाग्न थाल्यो । त्यसबाहेक वीपीको करिश्म्याटिक व्यक्तित्व, जुन राजा महेन्द्रलाई दिन प्रतिदिन बिझाउँदै गएको थियो । त्यसैले राजाले जनताको शक्ती खासगरी वीपी र नेपाली काँग्रेसलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र सुरु गरे ।
विर्तावाल, छोटे सामन्त र परिवर्तन मन नपराउने तत्वहरु जिल्ला जिल्लामा काँग्रेसको सरकारलाई बदनाम गराउने अनेक चलखेल गर्न थाले । विर्तावालहरुले राजाको दुहाई दिदै काँग्रेसको विरुध्द अभियान थाले । मुम्बईमा रहेका वीपीले त्यसबेला आक्रोशित हुँदै राजा महेन्द्रतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘प्रजातन्त्र आएर पनि कोही आफुलाई पहिलेकै जस्तै ठान्छ भने त्यो उसको दिवास्वप्न हो, त्यस्ता तत्वलाई म यहीबाट चुनौती दिन्छु ।’
वीपीले आफैलाई भनेको हो भन्ने कुरा राजा महेन्द्रले पनि महसुस गरेका थिए । उनले डा. तुलसी गिरीसँग भनेका रहेछन्, ‘तिम्रो बिपीले यो कसलाई भनेको भन त ? मलाई भनेको हैन ? मलाई नै भनेको हो ।’
योगी नरहरिनाथले ‘कर्मवीर महामण्डल’ नामक संस्थामार्फत पश्चिम १ नम्बर र २ नम्बरमा सामन्त बर्गलाई उक्साएर उपद्रव मच्चाए । पश्चिम २ नम्बरमा उपद्रव मच्चाउने सामन्तहरुको झुण्डले बडा हाकीमको कार्यालयमाथि हमला गर्दा भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली चलाउँदा केही मानिस मारीएका थिए । त्यसैताक योगी नरहरीनाथको झोलाबाट एउटा आपत्तीजनक चिठी पनि फेला प¥यो । नेपाली काँग्रेसको सरकारविरुध्दका गतिविधिमा सहयोग गर्नु भनेर राजाका पिएले जिल्लाका ठुला ठालु, बिर्तावाललाई सन्देश पठाएको व्यहोरो चिठीमा थियो । यसरी राजाको षडयन्त्र पर्दाफास भयो । बिपीले ‘योगीलाई कसैले उचालेको हो’ भनेर घुमाउरो पारामा राजातर्फ संकेत गरे ।
राजा महेन्द्र त्यसबेला युरोप भ्रमणमा थिए । उनका साथ सवारी मन्त्री सुवर्ण शमसेर पनि थिए । वीपीको कुरा सुनेपछि लण्डनमा राजा महेन्द्रले सवारी मन्त्रीलाई भने, ‘सुवर्ण यो कसलाई भनेको ? तिमीहरु के घमन्ड गर्छौ ? म यही बसी बसी तिमीहरुलाई खत्तम गरीदिन्छु ।’ त्यसबेला सुवर्ण शमसेरले , ‘खै के भयो ? रेडियोमा खबर दिनेले पनि टवीस्ट गरेको होला सरकार’ भनेर राजाको आक्रोश शान्त पारेका थिए ।
२०१६ सालको जाडो महिनामा म विरामी परें । प्लुरिसी र टिबी भएको शंकामा डाक्टरले उपचार थाले । म घरमै आराम गरेर बसीरहेको थिएँ । त्यसै वर्ष माघमा नेपालगंज सवारीमा राजा महेन्द्रको कडा भाषण आयो । मैले विरामी भएर ओछयानमा आराम गरीरेकै बेला राजाको भाषण गोरखा पत्रमा पढेको थिएँ । राजाले काँग्रेस सरकारको कार्यशैली यस्तै रहेमा आफु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यो सुनेपछि विपीले नेपालगंजमै रहेका सवारी मन्त्री डा. तुलसी गिरीलाई कडा प्रतिबादका साथ टेलिग्राम पठाएका थिए ।
वीपी स्वयंले पछि भने अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा भेटदा राजा महेन्द्र निकै प्रजातन्त्रवादीजस्तो देखिएर कुरा गर्थे, तर भित्र भित्र उनी षडयन्त्रमा लिप्त थिए । एक दिन वीपीले राजालाई भेटे । त्यसबेला राजाले वीपीसँग यस्तो गुनासो गरे, ‘तपाईहरु सबै काम जनताको सरकारले गर्ने हो भन्नुहुन्छ । मैले के गरेर बस्ने ? दरबारमा मलाई समय कटाउन नै गाह«ो हुन्छ ।’
वीपीले राजालाई सम्झाउँदै भने, ‘सरकारलाई समय कटाउन कठिन भएको भए नगर विकास योजना र राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापनातर्फ ध्यान बक्सी योजना दिइबक्से हामी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछौं ।’
राजाले ‘हुन्छ’ त भने, तर त्यसको चार पाँच महिनापछि २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ गरिहाले ।
नेपालमा यो घटना भईंरहदा म भने भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा युनेश्कोद्वारा आयोजित दक्षिण–पूर्वी एशियाली विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी सेमिनारमा सहभागी भईरहेको थिएँ । मेरो साथमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका डा. धु्रवमान अमात्य तथा त्रिचन्द्र कलेजका प्रिन्सीपल फणीन्द्रप्रसाद लोहनी पनि थिए । हामी दिल्लीको एउटा पाँच तारे होटलमा बसेका थियौं । म त्यसदिन बिहान होटलको काउन्टरमा बसेर फोनमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दमन शमसेरसँग भेटघाटको समय मिलाउने कोशीस गरीरहेको थिएँ । राजदूतसँग भोली भेटन आउँछौं भनेर भन्दा उनले ‘मलाई फुर्सद त नहोला, तर आउन त आउनुस्’ भने । त्यही काउन्टरमा तात्कालीन गोरखा परिषदका सांसद बेनीबहादुर कार्की (जो २०४८ सालको निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष भए) पनि भेटिए । उनी ‘मलाई पनि राजदूतसँग भेटने समय मिलाउनुस्’ भन्दै थिए ।
त्यो दिन हामी सेमीनारमा भाग लिएर राती आ–आफनो कोठामा आएर सुत्यौं । भोली पल्ट अर्थात २०१७ साल पुस २ गते झिसमिसेमै हामी सुतिरहेको कोठाको ढोका कसैले ढकढक्यायो । हामीलाई लाग्यो, चिया लिएर आउने ब्वाय हो । तर त्यसो होईन रहेछ । ढोका खोल्दा त बेनीबहादुर कार्की पो रहेछन् । उनी सिधै आएर खाटमा पल्टीएर एकदम आत्तिएको मुद्रामा भने, ‘लौ मिस्टर, नेपाल खत्तम ।’ उनको हातमा ‘स्टेट्स्म्यान’ नामक अंग्रेजी पत्रिका थियो, त्यसमा वीपी र महेन्द्रको फोटो प्रकाशित थियो । ठुलठुला अक्षरमा लेखिएको थियो, ‘किंग टेक्स ओभर इन नेपाल ।’ त्यही पत्रिका पढेर थाहा पायौं, बिपीलगायत नेपाली काँग्रेसका सबै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे ।
केही दिनपछि म काठमाडौं फर्किएँ । काठमाडौं उराठलाग्दो थियो । भोटाहीटीमा विश्वबन्धु थापा भेट भए । त्यसबेला विश्वबन्धु, ऋषिकेश शाह, तुलसी गिरी सबै षडयन्त्रमा संलग्न थिए । त्यो मलाई थाहा थिएन । विश्वबन्धुले मलाई कमलपोखरीस्थित उनीहरुको निवासमा आउन अनुरोध गरे । उनले भने, ‘आओ न यार , वहाँ डा. गीरी भी है ।’ डा. गिरीको नाम सुन्ने बित्तीकै मैले भनें, ‘सरी यार मैं नही आ सकता ।’
(नेपाली काँग्रेसका बयोवृद्ध पुराना नेता रामहरि जोशीसँग कुसुम भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारीत)
Previousभारत विरुद्ध व्याटिङ गर्दै नेपाल
Nextप्रियंकालाई पछि पादै दीपिका बनिन् यशियाकै सेक्सी महिला
अन्ततः ओली आफैंले खुलाए आफु प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो !
१४ पुष २०७४, शुक्रबार १३:५४
दोस्रो चरण स्थानीय निर्वाचनका दिन मध्याह्नअघि नै मतदानस्थल पुगेर मतदान गर्न सुझाव
१३ असार २०७४, मंगलवार ०८:११
डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
२७ श्रावण २०७४, शुक्रबार १४:३६